Andro: 19 Oktobra 2019
Konya Blue Train dia miasa eo amin'ny Konya sy Izmir (Basmane). Konya Blue Train dia iray amin'ireo fiaran-dàlamby fototra.Mahita ny lalana ianao, ny fandaharam-potoana, ny fiaran-dalamby ary ny vidin'ny tapakila eto. konya- [More ...]
Ny talen'ny jeneralin'ny masoivohom-piaramanidina air-endrin'ny fanjakana (DHMİ) ary ny filohan'ny birao talen'ny Hüseyin Keskin, izay nanao fizahana tao amin'ny DHMİ Air fifehy ny fifamoivoizana, dia nanao fanombanana avy amin'ny kaonty media sosialy momba ny fitsidihana. Keskin, "Ny foibenay, stratejika [More ...]
TÜLOMSAŞ Fanitsiana ny olona amin'ny lalàna mifehy ny fanovana sy ny fanovana lohateny. Torkia loha masiny sy Engine Industry Corporation Foibe Staff Fitsipika momba ny Promotion sy Fiovan'ny Lohateny Fanitsiana ao amin'ny Fitsipika. [More ...]
Ben'ny tanànan'ny Kayseri Metropolitan Memduh Büyükkılıç, ny minisitry ny angovo taloha sy ny harena voajanahary Taner Yıldız miaraka amin'ny Filohan'ny lanonam-panokafana faobe an'ny Filohan'ny Derevenk Viaduct ary [More ...]
Metmetçığ miarahaba avy amin'ny Kayseri Transportation Inc. Namaky ny hiram-pirenena izy ireo talohan'ny nanombohan'ny fitoviana sy nanohana ny fiasa tamin'ny Lohataonan'ny fandriampahalemana. Ny fitsidihan'ny Kayseri Cemetary ny tanora KAYMEK ao anatin'ny Kayseri Metropolitan Municipality ary [More ...]
Ny hopitalim-panjakana izay hita ao amin'ny distrikan'i Orhan ao amin'ny distrika Kandira dia miditra amin'ny alàlan'ny Kabaağaç Street manomboka amin'ny làlana lehibe ao afovoan-tanàna. Noho ny hamafin'ny lalana Kabaağaç, nentina tany amin'ny hopitaly State Kandira ireo marary. [More ...]
Ny filohan'ny İBB Ekrem İmamoğlu Bolu Munisipalin'i Melen Dam sy Izmit Metropolitan Munich talohan'ny fitsidihana ireo distrika tao Sapanca dia nihaona tamin'ny olom-pirenena izay miambina amin'ny tsipika tariby. Nihaino ny fangatahan'ny olom-pirenena i İmamoğlu, [More ...]
Ny filohan'ny İBB Ekrem İmamoğlu dia nanao ny fehezan-teny famaranana tamin'ny «Mukhtars Workshop düzenlen izay natao tao amin'ny Eurasian Show and Art Art any Yenikapı ary nitondra ny loham-pianakaviana 961. Avy amin'ny malemisy ho an'ny tobin'ny Haydarpaşa sy Sirkeci [More ...]
IMM dia voahilika tamim-pitolomana ho an'ny Haydarpaşa - Sirneci Railway. İmamoğlu; “Mampihomehy ilay fanaintainana. Tsy fanarahan-dalàna ny fanafoanana. Hotaterinay amin'ny fitsarana ny raharaha ary hanao fitarainana izahay. ” Hotetehina io alatsinainy io. Istanbul Metropolitan Municipality [More ...]
Loza fiaran-dalamby İzmir! .. Manomboka amin'ny Alsancak, ny fiantsonan'ny fiara fitaterana sarety 7, nidina avy tao amin'ny Làlana Şehitler noho ny antony tsy voafaritra. Tsy nisy ny ratra ary nilaza ny fanakorontanana ny tranga. Izmir's Mansion [More ...]
10 Kardemir 2, izay najanona tamin'ny volana jona. Nalefa indray ny Zavamaniry Zavamaniry vaovao miaraka amina lanonana iray natao androany taorian'ny fitomboan'ny fahafahan'ny 124 andro sy ny fampiasam-bola fanavaozana-fanavaozana. Ilay lanonana [More ...]
Androany tao amin'ny tantara 19 ny volana oktobra 1898 Banhdad Railway concession dia nomena ny Deutche Bank indray.